Nabad Suggida oo labo ruux u soo qabatay dilkii Ganacsade Daahir Axmed Jimcaale | Baydhabo Online
Ciidamada Nabad Suggida Degmada Dayniile, ayaa gacanta ku soo dhigay labo ruux oo si aad ah loogu tuhmaayo inay ka dambeeyeen dilkii habeen hore loo geystay Ganacsade Daahir Axmed Jimcaale oo lagu dilay duleedka dhanka Koonfureed ee Magaalada Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan NISA, gaar ahaan kuwa ka howlgala Degmada Dayniile, ayaa sheegay labadaan ruux in gacanta lagu soo dhigay shalay, xilli dharkooda ay ka muuqdeen dhiig, taasi oo keentay shakiga weyn ee ay ciidamada ku qabteen.
Qaar ka tirsan ehelada Marxuumka la dilay ayaa sheegay labada ruux ee gacanta lagu haayo Shaatiyada ay wataan inay ku haleysnaayeen dhiig fara badan, shalayna ciidamada ay gacanta ku dhigeen, xilli ay marayeen Xaafado ka mid ah Degmada Dayniile.
Dilka Ganacsade Daahir Axmed Jimcaale, ayaa wuxuu ka dhacay Inta u dhaxeysa Xeradii hore ee ciidanka Asluubta iyo Dabaqa Maslax ee duleedka Muqdisho, waxaana Burcada falka dilka ah geystay oo adeegsanaayay Toorey ay u baxsadeen dhanka Dayniile.
Ciidamo ka tirsan Nabad Suggida oo tagay guriga Marxuum Daahir Axmed Jimcaale, ayaa halkaasi waxa ay ka qaadeen dhiiga Marxuumka, si baaris la isugula sameeyo dhiiga shaatiyada Ragga la qabtay ka muuqda iyo ninka la dilay dhiigiisa.
Ganacsade Daahir Axmed Jimcaale, ayaa wuxuu goob ganacsi oo lagu magacaabo Carwo Fariid ku lahaa Isgoyska KM4 ee Magaalada Muqdisho, iyadoo dilkiisa uu yimid kadib markii rag toorey ku hubaysan ay guriga ugu dhaceen habeen hore, kadibna saddex jeer tooreyda ay caloosha ka geliyeen.
Dilalka qorsheysan ee tooreyda iyo Bastoolada loo adeegsado ayaa ka dhaca Magaalada Muqdisho, oo ay fuliyaan Shabaabka iyo kooxo kale.